Traffic Racer Mod APK v3.35.0 Money Unlimited - lomnqweno yimfumba obububo
EyeThupha 6, 2018	off	by exacthacks
Ngaba ufuna ukuba Traffic Racer Mod APK v3.35.0 ukufumana imali mda kulo mdlalo? Ke ungasekunene indawo. Traffic Racer Mod APK v3.35.0 iya kukuvumela ukuba ufumane imali Infinity yomdlalo wakho online. Le Traic Racer Apk Mod kulula ukuyisebenzisa kwaye unokufumana imali eninzi ngaphandle kokuthintelwa.
Apho iTrafik Racer Mod APK v3.35.0 Imisebenzi yeMali engenamda?
Njengoko sisazi umdlalo developer ukudala le game for 2 uhlobo izixhobo ezifana:
Ke sinazo zombini iindlela zokusebenzisa Ezokuhamba ngetrafikhi, ayinamsebenzi ukuba ungowaliphi na iqonga. Iya kuxhasa zombini izixhobo kwaye isebenza kuzo zombini ngaphandle kwempazamo. Thina ukuyila le program bazimisele kakhulu kwaye akazange abanjwe ukukopela nge umdlalo. Kuba uya kuba neempawu ezingakumbi kumdlalo wakho.
Ezi zombini umsebezi ekhuselekileyo umdlalo yakho naluphi na uhlobo inkcaso wena ungakwazi ukufihla indawo yakho usebenzisa ukhuselo. Yinto imisebenzi kuzo zonke uguqulelo Android kwezixhobo mobile kunye iOS kanye. Uyakwazi ukufumana imali mda kwi zombini iifowuni (Android-iOS). Kufuneka ukhethe inketho yesixhobo sakho enye yazo ngaphambi kokuthatha isenzo. Yintoni inzuzo yokusebenzisa i-Traic Racer Mod APK yakho v3.35.0 Imali engenamda:
Imali engenamkhawulo yokuhamba ngetrafikhi
Ukuhamba ngetrafikhi kukhululekile ukuba Ukhuphele
Imifanekiso emangalisayo ye-3D
Ngokuzolileyo Ungayiphatha Imoto
Iibhodi zeeNkokeli & Impumelelo ezikhoyo kwi-Intanethi
Into malunga traffic Racer umdlalo:
Traffic Racer ngumdlalo racing leyo esiyikhuphe Sep 2012. Mobile phone lomsebenzisi kunye nayiphi na inkqubo yokusebenza angaba OWAYEBEKA izithuthi njengoko iyafumaneka kwi Android, iOS and Microsoft Windows. nge 100 izigidi uzilayishe yenye umdlalo idumileyo ehlabathini.
Traffic Racer ayikho efanayo kwezinye imidlalo nemidyarho. Kule game abadlali kufuneka ngokobuhlanga kwi traffic ngokwenene. Umdlalo Kulula kakhulu ukudlala ngenxa oko Ukuphathwa smooth nezichanekileyo. Lo mdlalo kuqala imboniselo umntu kwaye kukho ezininzi iimoto kunye nezithuthi ezininzi ezinzima. Uninzi iimoto itshixiwe kwaye umsebenzisi kufuneka ukuwavula kunye imali imali evela racing. Traffic Racer inikeza iindlela ezininzi umdlalo ezifana:
kwesona santya siphezulu
Ukuba uqhuba ngokukhawuleza yezithuthi, uya kufumana imali engaphezulu. Imeko racing ibhanile umdlalo intsasa ezolileyo sunny kodwa umsebenzisi uvule indlela ikhephu, mode ebusuku ne abarhola ludume. Ngenxa yobuhle kwalo mdlalo ukuba imizobo elungileyo kunye iintlobo ezahlukileyo zeenqwelo. ukudlala nje umdlalo ngaphandle kokuchitha imali yakho.
CategoryAPK Mod imidlalo
tagsTraffic Racer Mod APK 1.9 Ukukhuphela mahala Ukuvuselela i-APK yeTrafiki yeTrafiki
EyoKwindla 9, 2020 e 1:08 am
Iimodyuli zokusebenza ezilungileyo. Enkosi
IWindows 7 Inguqulelo epheleleyo ye-ISO 32/64-bit 
Imvelaphi yeSims 4 CD Key Generator – sibange + Uluhlu lweeKhowudi zokuSebenza